November 2019 – " कञ्चनजंगा News "
मोटरसाइकल ओभरटेक गरेको निहुँमा ह*त्या ग’र्ने चार ज’ना प*क्राउ
No Comments on मोटरसाइकल ओभरटेक गरेको निहुँमा ह*त्या ग’र्ने चार ज’ना प*क्राउ
कञ्चनपुर। मोटरसाइकल ओ’भरटेक गरेको नि’हुँमा च’क्कु प्र’हार गरी ह’त्या घ’टनामा प’क्राउ परेका चार जनाले अ’पराध स्वि’कारेका छन्। बिहीबार क’ञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-१८ गोबरैयामा २२ वर्षीय दीपक प’न्तले मोट’रसाइकल ओ’भरटेक गरेको भन्दै चारजनाको स’मूहले च’क्कु र हे’लमेट प्र’हार गरेर ह’त्या गरेका थिए।
शुक्रवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प’क्राउ परेका चार जनाले अ’पराध स्वि’कारेको जनाएको छ।
घ’टनामा प’क्राउ पर्नेमा १९ वर्षीय विनोद बोहरा, २२ वर्षीय मनिष नाथ, २० वर्षीय नवीन सिंह र २२ वर्षकै गणेश लुहार रहेका छन्। यी मध्ये मनिष नाथ ज्या’न मा’र्ने उ’द्योगको मु’द्दा ला’गेका हुन।
यसअघि उनले भीमदत्त नगरपालिकाको मझगाउँमा लागेको रामलिलामा ‘ज्या’नमा’रा’ ह’मला गरेका थिए। उनी ‘फ’रार सूचिमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मो’टरसा’इलमा सवार प’न्तलाई चारजनाको समूहले आफूहरुको स्कु’टरलाई किन ओ’भरटेक गरेको भन्दै हे’लमेट, च’क्कुले कु’टपिट गरेका थिए।
च’क्कु प्र’हारमा मनिषको प्रमुख भूमिका रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका एसपी दिनेश आचार्यले बताए। कु’टपि’टबाट घा’इते प’न्तलाई म’हाकाली अस्प’तालमा उप’चार स’म्भव नभएपछि भारत रे’फर गरिएको थियो। भारत लै’जादै गर्दा उनको बाटोमा ज्या’न गएको हो। स्थानीयले दो’षीमा’थी का’रवा’हीको मा’ग गरेका छन्। मृ’तकको श’व महाकाली अ’ञ्चल अ’स्पतालमा राखिएको छ।
यस्ता महिला चाहन्छन् पुरुषहरु
No Comments on यस्ता महिला चाहन्छन् पुरुषहरु
मानव सृष्टिका लागि महिला र पुरुष दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण एवं एक–अर्काका परिपूरक हुन् । यीमध्ये कुनै एकको अनुपस्थितिमा प्राकृतिक सृष्टि सञ्चालन सम्भव छैन तसर्थ महिलालाई पुरुष एवं पुरुषलाई महिलाको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले पनि विवाह नामक संस्कार सम्पन्न गर्ने सनातन परम्परा छ ।
यसका लागि महिला–पुरुष दुवैले आफ्नो रुचिअनुरूप विपरीत लिङ्गी छनोट गर्छन् । यसमा कसैले सुन्दरता त कसैले बुद्धिमत्तामा जोड दिन्छन् अनि कसैले यी दुवैको संयोजन चाहन्छन् भने कतिपयले हरेक समय आफूअनुकूल चल्ने जीवनसाथी पनि चाहेका हुनसक्छन् ।यहाँ पुरुषको रोजाइमा कस्ता महिला पर्छन् भन्ने जिज्ञासा शान्त पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
श्रीमानका लागि श्रीमतीको सौन्दर्यले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ तर सुन्दरता मात्र सबैथोक भने होइन । श्रीमानले श्रीमतीको सौन्दर्यभन्दा बढी अन्य कुरामा ध्यान पुर्‍याएका हुन्छन् । त्यस्ता केही विशेष गुण भएका महिलालाई सुन्दरता औसत मात्र भए पनि पुरुषले अत्यधिक रुचाउँछन् ।
ठूल्ठूलो स्वरमा कुरा गर्ने, आफूभन्दा ठूलाको अपमान गर्ने तथा स्वेच्छाचारी महिला कहिल्यै पुरुषको रोजाइमा पर्दैनन् । श्रीमती संस्कारी नहुँदा आफूले लज्जित हुनुपर्ने हो कि भन्ने डर पुरुषको मनमा सदैव रहन्छ ।
श्रीमान हरुको चाहना श्रीमतीले आफैंले जसरी आफ्ना आमाबाबुलाई पनि हृदयदेखि नै रुचाऊन् भन्ने हुन्छ त्यसैगरी घरका अन्य सदस्यलाई पनि उसैगरी प्रेमपूर्ण व्यवहार गरून् र कसैसँग द्वेष नलिऊन् भन्ने हुन्छ । आफ्नी श्रीमती असल गृहनिर्मातृको भूमिकामा रमाएको हेर्ने चाहना अधिकांश पुरुषमा पाइन्छ ।
पहिलो हेराइमा शारीरिक सुन्दरतालाई महत्व दिने वं राम्रो व्यवहारका कारण सबैको मन जित्न सक्ने महिलालाई पुरुषहरूले बढी रुचाउँछन् । झूटो एवं बनावटी कुरा गर्नेहरूलाई कसैले मन पराउँदैनन् ।
भनिन्छ, श्रीमानको मन छुन पेटको मार्ग भएर हिँड्नुपर्छ । त्यसैले पनि सुन्दर महिलाभन्दा मीठो खाना बनाउन जान्ने श्रीमतीले सजिलै श्रीमान्को मनमा डेरा जमाउँछिन् । श्रीमती खाना बनाउन सिपालु भए श्रीमान्ले आफन्त एवं साथीभाइका अगाडि गर्व गर्न सक्छन् ।
असल श्रीमती एवं बुहारीका साथै आफ्नी श्रीमती सन्तानका लागि असल आमा पनि बनून् भन्ने चाहना हरेक श्रीमानमा हुन्छ । सन्तानको स्वास्थ्यदेखि लिएर पढाइ–लेखाइको पनि ख्याल राख्दै उनीहरूलाई संस्कारवान् बनाउन लागिपर्ने महिला सदैव पुरुषहरूको रोजाइमा पर्छन् ।
अन्तरंग वा यौ*नसम्बन्धमा सक्रिय एवं रुचिपूर्वक भाग लिने श्रीमतीप्रति हरेक श्रीमान् हृदयदेखि नै समर्पित हुन्छन् । सुन्दर एवं राम्रो फिगर भएका तर नखरा बढी गर्ने एवं सिर्जनशील यौ*नसम्बन्ध नरुचाउने महिलाहरू पुरुषको रोजाइमा पर्दैनन् । नारी म्यागजिन बाट
No Comments on भोट हाल्न जाँदै ९७ बर्षिया बृद्धा आमा
काठमाडौं / भोट गर्न बृद्धबृद्धा मतदान स्थलमा पुगेका छन्। नाति र छोराको बुइ चढेर बृद्धबृद्धा मतदान गर्न पुगेका हुन्। दाङको बबई गाउँपालिका वडा नम्बर ७ चरकमटिया निवासी ९७ वर्षकी सेती बोटेले मतदान गरेकी हुन्।
१९७९ चैत २७ गते जन्मिएकी बोटेले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेकी हुन्। बिहान ७ बजेदेखि जारी मतदान प्रक्रिया बेलुका ५ बजेसम्म चल्ने छ।
प्रदेशसभा सदस्यलाई निर्वा्चित गराउन ६८ हजार ७ सय १९ जनाले मतदान गर्ने छन्। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा अध्यक्ष चुन्नका लागि ४ हजार ४ सय ५३ जनाले भोट हाल्ने छन्।
यो पनि हेर्नुहोस्:काम सुरु नगर्दै राजीनामा
काठमाडौं। इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त भएका डेविड पेम्सलले काम सुरु गर्नु पूर्व नै राजीनामा दिएका छन् । पेम्सल गएको अक्टोबरमा प्रिमियर लिगको प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त भएका थिए।
उनले आउँदो फेब्रुअरीमा प्रमुख कार्यकारीका रुपमा काम सुरु गर्नु पर्ने थियो । तर व्यक्तिगत जीवनका बारेमा विभिन्न आरोपसहित पत्रपत्रिकामा आएका खबरपछि उनले राजीनामा दिएका हुन्। रिचार्ड मास्टर्स अन्तरिम प्रमुख कार्यकारीका रुपमा कायम रहने प्रिमियर लिगले जनाएको छ।
पुर्व अधिकारजकुमार धिरेन्द्रकि छोरीको यस्तो हर्कत, सामाजिक संजालमा भाइरल (हेर्नुहोस तस्बिर र भिडियो सहित)
No Comments on पुर्व अधिकारजकुमार धिरेन्द्रकि छोरीको यस्तो हर्कत, सामाजिक संजालमा भाइरल (हेर्नुहोस तस्बिर र भिडियो सहित)
सर्लिन ग्रेनेसँग विवाह गरेपछि धिरेन्द्रलाई अधिराजकुमारको पदबाट मुक्त्त गरिएको थियो । सलिर्नन र धिरेन्द्रबाट एक छोरीको जन्म भएको थियो । उशाना लैला शाह धिरेन्द्रको कान्छी छोरी हुन् । अहिले उनै उशाना समाजिक संजालमा भाइरल भइरहेकि छिन् । युट्युबर उशानाले विभिन्न भिडियो बनाउने गरेकि छिन् ।
तौल बढेपछि दुब्लाउनकालागि गरेका प्रयासहरुलाई उशाना युट्युबमा हाल्छिन् । उनले समाजिक संजालमा सार्वजनिक गरेको तस्बिरहरु अहिले भाइरल भइरहेको छ । कतिपयले यो भिडियोमा पुर्व अधिकारजकुमार धिरेन्द्रकि छोरी होइनन् भन्दै कमेन्ट गरेका छन् । हेरौँ उनका तस्बिर र भिडियोः
आज उपनिर्वाचन : मतदान शुरु हुँदै गर्दा कास्कीमा घट्यो रोचक घट्ना हेर्नुहोस !
No Comments on आज उपनिर्वाचन : मतदान शुरु हुँदै गर्दा कास्कीमा घट्यो रोचक घट्ना हेर्नुहोस !
कास्की क्षेत्र नं २ मा आज बिहान ७ बजेदेखि प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि मतदान शुरु भएको छ । यस क्षेत्रमा ३२ मतदानस्थलका ८२ मतदान केन्द्रमा निर्धारित समयमै मतदान शुरु भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीका प्रमुख महेन्द्रराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । प्रायः सबै मतदान केन्द्रमा मतदाता बिहानैदेखि मतदान गर्न लामबद्ध भएका छन् । बिहानको समयमा धेरै बेर मतदान गर्नका लागि कुर्न नपर्नुपर्ने उद्देश्यका साथ कतिपय मतदाता बिहानै मतदान गर्न आएका हुन् । यसैबीच, मतदानस्थलमा सुरक्षाको व्यवस्था कडा बनाइएको छ ।
रोचक कुरा त के छ भने मतदानका लागि मतदाता उत्साहित भइरहेका बेला कास्की २ का काँग्रेस उम्मेदवार खेमराज पौडेलले मतदान गर्न पाउनु हुने छैन । उहाको घर तथा मतदाता नामावली कास्की क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्ने भएका कारण उहाँ आफैले भने मतदान गर्न नपाउने हुनुभएको हो । तर उहाका प्रतिस्पर्धी नेकपा उम्मेद्वार विद्या भट्टराईले भने मतदान गर्न पाउनुहुने छ ।
आज उपनिर्वाचन ः मतदान शुरु
नारायण न्यौपाने – प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको रिक्त ५२ पदको उपनिर्वाचनका लागि आज बिहान सात बजेदेखि मतदान शुरु भएको छ ।
यसैबीच भक्तपुरको चाँगुनारायण–२ दुवाकोट मतदान केन्द्रमा भएको मतदानको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अवलोकन गर्नुभएको छ । उपनिर्वाचनको अवलोकनका लागि भक्तपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत जगत्नारायण प्रधानले यहाँ हुने निर्वाचनका लागि गरिएको आवश्यक तयारीबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियालाई जानकारी दिनुभयो । उपनिर्वाचन अवलोकनका लागि कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरु मतदान केन्द्र आइसक्नु भएको छ